I-Ellicott Dredges Isiza Ukungeza ama-2,300 km we-Bangladesh Waterways - i-Ellicott Dredges
Amaphrojekthi wokwakha kabusha angeze amanye amakhilomitha angama-2,300 wemizila yokuhamba olwandle emfuleni waseBangladesh eminyakeni eminingana edlule.
In 2012, kulandela uhlelo olusha lokuvuselelwa kukahulumeni waseBangladesh, Ellicott waqala ukunikeza Ukudonswa kweBangladesh Inland Waterway Transport Authority (i-BIWTA) kanye neBhodi Yezokuthuthukiswa Kwamanzi yaseBangladesh (BWDB). Kule minyaka eyishumi edlule, lezi zinhlangano zombili zikahulumeni zithenge ama-dredges angama-32, ngaphezulu kwengxenye yawo angama-Ellicott dredges. Lokhu kufaka ukuhlanganiswa kwe-Series 1270 18-inch Dragon®, i-Series 1870 20-inch Dragon®, kanye ne-Series 3870 26-inch Super Dragon ™ dredgers. I-Ellicott® brand dredge yokuqala yanikezwa uhulumeni waseBangladesh, owayaziwa ngokuthi yi-East Pakistan ngaleso sikhathi, ngo-1963.
Njengendlela ebiza kancane yokuhambisa imithwalo nabantu, imigwaqo yamanzi ibalulekile eBangladesh, ehlanganiswe nolwandle olunamandla kunawo wonke olwandle. Cishe ama-30% wezwe ahlala ngaphansi kwamamitha ama-2 ngaphezu kogu lolwandle, futhi njengoba amazinga olwandle ekhuphuka, inhlabathi igcwalisa imigwaqo yamanzi, okuholele ekuvalaneni nasezikhukhuleni.
I-Ellicott 20-inch Dragon® dredge eboniswe ngenhla
Muva nje amayunithi ayishumi (10) e-Ellicott avulwe ngoMeyi 6 nguNdunankulu UShakas Hasina. Emcimbini wokugcotshwa, uNdunankulu wethule imikhumbi yasolwandle engaphezu kwekhulu kubalwa nabakwa-Ellicott cutter suction dredger. Amayunithi amasha e-Ellicott ajoyina ama-dredger amaningi angabanikazi abasebenza kulo lonke elaseBangladesh.
Lo mcimbi bekungowokubungaza amandla amasha okumba kukahulumeni kodwa futhi bekuyithuba lokubeka umbono ngomlando omude wokudilizwa eBangladesh. Ubaba kaNdunankulu, uBangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, wayenguNdunankulu wokuqala waseBangladesh kwathi ngawo-1970 waletha amadolobha ayisikhombisa (7) eBangladesh; kufaka phakathi ama-elredott® brand dredges ambalwa. UNdunankulu uHasina wengeze ukuthi ukungena eBangladesh akukaze kubhekwe yilabo ababephethe phakathi kuka-1975 no-1996.
Ngenxa yalokhu kungabi bikho kwesondlo, ukwakhiwa, kanye nenzalo yemvelo, ukuhamba emanzini eBangladesh kungaba nzima. Ngosizo lwe-Ellicott Dredges, iBangladesh manje isinama-5,900km wemigwaqo efinyelelekayo phakathi nenkathi eyomile, isuka ku-3,865km kuphela ngo-2005.
I-Ellicott 2070 Dragon® dredge esebenza eBangladesh
Ukuqonda izinzuzo zokudonsa kabusha, uNdunankulu unikeze imali ebalulekile ukuvikela isimo esiyingqayizivele seBangladesh. Uqhakambise ukuthi izwe njengamanje lidinga ama-500 dredges wokuzulazula, ukubuyiselwa komhlaba, nokulawulwa kwezikhukhula.
Uhulumeni Uhlelo lweDelta 2100 iqhubekisela phambili le ajenda yokumba phansi futhi ivikele ikusasa lemithombo yamanzi futhi ihlose ukunciphisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu kanye nezinhlekelele zemvelo. Kuvunyelwe ngoSepthemba ka-2018, kuwuhlelo lwesikhathi eside olufaka izinguquko nokungenelela okudingekayo ukwenza iBangladesh Delta iphephe, ichume, futhi ibhekane nesimo sezulu ngo-2100.